Ukuhamba ukuya kwiNdawo yaseSchengen kule minyaka imbalwa ilandelayo
Amazwe akummandla we-EU / Schengen afumana iitoni zabakhenkethi minyaka le, yiyo loo nto la mazwe esebenza ubusuku nemini ukwenza kube lula kwaye kukhuseleke kubahambi nabasemagunyeni. Kutshanje, i-European Union ihlanganise imimiselo emitsha, izixhobo zeteknoloji kunye nezikimu ukulungiselela ukwanda kwenani labatyeleli.
Kwiminyaka embalwa ukusukela ngoku, kuyakubakho utshintsho oluninzi kwindlela abantu abaya ngayo eYurophu. Abahambi kufuneka bazixhobise ngezi ziqwenga zolwazi kwaye kufuneka bazilungiselele. Jonga ezinye zeenguqu ezinokuthi ziqale ukusebenza kwikamva elikufutshane elingezantsi;
Ilungu ngalinye leLizwe kwilizwe ngalinye lesithathu ukufumana iZiko leZicelo
Abahambi abazukufuna ukuya kwelinye ilizwe ngaphambi kokufaka isicelo seVisagen visa. IBhunga le-EU libeke ikhowudi yomda ehlaziyiweyo yeSchengen ngoJuni 2018 eya kuthi iqinisekise ukuba abahamba rhoqo kwindawo yaseSchengen bafumana iinkqubo ezicacileyo nezikhawulezayo. Le khowudi yomda ihlaziyiweyo iya kwenza ukuba kube lula kubakhenkethi ukufaka isicelo ngaphandle kokuya kwelinye ilizwe. Ukusukela ekuqaleni kwe2020, oku kulandelayo kuya kusebenza kuwo onke amalungu eSchengen;
Ilungu ngalinye leSchengen linokumelwa lelinye ilizwe elinamalungu afanelekileyo ukuba livavanye kwaye lithathe isigqibo malunga nesicelo ngasinye esivela kubahambi.
Yonyusa umrhumo wevisa zeSchengen
Ngenxa yotshintsho lwekhowudi yeVhengen Visa, ukusukela ngeJanuwari 2020, abahambi abafuna iSchengen Visa kuya kufuneka bahlawule imali ephezulu. Kuza kubakho ukunyuswa kwama-33.3% ukusuka kwi-60 euro ukuya kwi-80 euro, kwaye oku kuya kubakho izixhobo ezaneleyo zokujongana nomceli mngeni wokufuduka ngokungekho mthethweni. Ilungu lokuqala lelungu leSchengen ukuthobela le khowudi ihlaziyiweyo yi-Switzerland. Zonke izikhundla zoonozakuzaku baseSwitzerland kunye nabasemagunyeni abamele baya kuthi ngoFebruwari 2, 2020 bahlawulise i-80 euros endaweni ye-60 euro. Amanye amazwe akummandla waseSchengen aya kunyusa nemali yokundwendwela malunga nelo xesha.
Abahambi kungekudala bazokwazi ukufaka iZicelo zeVisa ngaphambi kwenyanga ezintandathu
Kude kube ngoku, abahambi banokufaka isicelo sevisa kuphela kwiinyanga ezintathu ngaphambi komhla wokuhamba. Kodwa ngekhowudi ye-visa ehlaziyiweyo, ngoku banokuhlawula izicelo zabo ze-visa kwiinyanga ezintandathu ngaphambi komhla wabo wokuhamba nangona abahambi bengenako ukufaka isicelo sabo se-visa emva kweenyanga ezintathu ngaphandle kwakwimeko ezingxamisekileyo.
Izitampu zepaspoti azisayi kusetyenziswa
Abahambi abangengabo base-EU abangena kumazwe angamalungu eSchengen abasayi kuphinda babe nesitampu ngeepasipoti zabo emva kowama-2022. Inkqubo yokuNgena / yokuPhuma entsha (i-EES) iyakuthatha indawo yesidingo sezitampu zepasipoti kuba yonke idatha yokungena nokuphuma sele igcinwe kule nkqubo.
Ukusukela ngeyoMqungu yowama-2021, abahambi kuya kufuneka benze isicelo se-Visa ye-ETIAS kwaye bavunywe ngaphambi kokuba baye e-EU. I-Visa ye-ETIAS sisikimu sokuqala apho umhambi kufuneka afake isicelo sokugunyaziswa ngaphambi kokuhamba. I-ETIAS imele uLwazi lwezohambo lwaseYurophu kunye neNkqubo yoGunyaziso Ukufaka isicelo se-ETIAS kuthatha imizuzu eli-15, kwaye isiqinisekiso semvume siya kuthunyelwa ngeposi yomhambi ekufuneka beyiprintile kwaye bayithenda xa bengena kwizibuko laseSchengen.
Itekhnoloji yoLawulo lweMida ePhambili
Kukho itekhnoloji entsha yokujonga umda apho i-Border yase-Europe kunye ne-Arhente yoLondolozo lweNxweme izama kwiLisbon Airport Authority ukwenza lula ukuba abahambi bawele imida. Oku kususa uxinzelelo lokulinda emigceni ukuya kwiithenda zokundwendwela kunogada wemida. Ukuskena ngaphandle kweminwe kweminwe kunye nokuqondwa kobuso kwenza kube lula ukufikelela emdeni. Le teknoloji iya kwenza kube lula kwaye ikhuseleke kubahambi. Enye itekhnoloji, iBorderCtrl, inkqubo yobukrelekrele bokuzenzela, ngoku isebenza, kwaye kungekudala izakuqala ukusebenza noonogada bemida ukufumanisa ukuba ngubani na kubo bonke abahamba betshekisha imida.
Kunjani kubantu base-UK ukuba bangene kwindawo yaseSchengen?
Ukuya kwi-EU kulindeleke ukuba kube lula kubantu abaninzi, kodwa akufani kubemi base-UK. I-United Kingdom iyaphuma kwi-European Union kwaye abemi bayo ngekhe baphinde banandiphe ilungelo lokuhamba ngaphandle kwe-visa ngaphandle kweYurophu. Ukusukela nge-Janyuwari 2021, abemi base-UK baya kudinga ukufaka isicelo se-Visa ye-ETIAS. Iipaspoti zabo kufuneka zisebenze ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintathu emva kokuhlala kwabo okucwangcisiweyo, kwaye akufuneki kubengaphezulu kweminyaka elishumi. Abayi kuvunyelwa ukuba bahambe ngamasango abekelwe abantu be-EU.